Uthando - umuzwa emangalisayo ukuthi usenza umuntu, okwenza kube onawo wonke amandla futhi ukulungele zobuqhawe. Ngakho ufuna ukuba uthandana njalo ahlukaniswe, nokuvuka ekuseni emahlombe womunye nomunye futhi ulale embhedeni efanayo. Futhi-ke lokugcina kwanoma iyiphi indaba ezinhle zothando, noma kunalokho isigaba esisha ubudlelwane - kuba umndeni. Kodwa, ngaphambi kokuphela kwalesi umndeni idaliwe, umfana kufanele enze isiphakamiso intombazane - othandekayo wakhe. Kwaba ngemva ekuthandweni kwayo usungaqala ukuhlela ukuphila esikhathini esizayo kanye - ukuphila oshadile.
Namuhla, intsha namuhla, futhi ikakhulukazi guys, hhayi ngempela unamathisele ukubaluleka yokuthi, indlela yokwenza intombazane isiphakamiso. Abaningi bacabanga ukuthi isicelo somshado - banal kakhulu, ngisho nesiko uyisidala futhi ngokuvamile kungagcini lo mbuzo: "Cha gcagca kithi." Kuzwakala zezwe, grey ngisho hhayi ezikhangayo.
Futhi kukhona guys abangafuni nje ukwazi ukuthi ukwenza intombazane ukunikela, kodwa futhi ihlanganise asemini lalinamandla futhi bahlele ukuqashelwa abangasoze balulibala ayizintandokazi zabo. Futhi ngakho guys ngifuna ihlombe. Emva isicelo somshado ukhunjulwa othandweni for a lifetime. Lezi izinkumbulo kuzosithinta, ukunikeza injabulo, ukuvumelanisa ezimweni izingxabano noma ukungaboni ngaso linye. Ngisho kancane okhela imizwa ithule mhlawumbe uma sikhumbula ukuthi ayenza nentombi yakho.
Futhi we nothi yokuthi zonke amantombazane (ngisho ngesihluku kakhulu unganakile) enhliziyweni bemvelo romantic. Lokhu kuyiqiniso ikakhulukazi ngokuphathelene nothando futhi imizwa. Yena ebuntwaneni iphupho lakhe, lokuthi ngolunye usuku kubo priskachet kwi inkunzi ezimhlophe, isikhulu handsome, futhi uyakususa nabo e Fairy umbuso wabo. Kumelwe uthi, kule ndaba intombazane babekholelwa ngisho esevele abadala ngempela.
Indlela yokwenza isiphakamiso intombazane ukuthi wakhumbula lezo zikhathi? Kunjani ukuba sicabangele ezimbalwa ongakhetha kuzo? Mhlawumbe ezinye uhlobo umqondo futhi uyokhanga!
Indlela yendabuko kunazo sokuvuma uthando lwakhe sicele isandla othandekayo - iwukuba ukukhuluma ngemizwa yabo bese utshela ngenhloso ngesikhathi usuku lwezithandani, futhi dinner ngekhandlela. Yebo, umqondo abashayiwe. Kodwa, njengoba umkhuba imibukiso, amantombazane ajabulela lapho isikhonzi ebalethela isidlo embozwe ukumangala ngaphakathi noma dessert, lapho bethola indandatho elifanekisela ukuzibandakanya kwabo.
Uma yokudlela - hhayi ngempela endaweni efanele, kuba impela efanelekayo ukuba kuthiwe uthando ushiyiwe emgwaqweni, ipaki noma ingadi yomphakathi. Kulapha, phansi omunye amadolo, umfana ungasho amazwi main. Futhi kuphela Kulobo busuku obucwathile, nenyanga ngeke ukufakaza ekuqaleni umndeni omusha.
Uma isimemezelo bendabuko kanye nemtsetfo wesintfu lothando akuyona ezikhangayo, bese ungakwazi cabanga indlela yokwenza ibhokisi intombazane isiphakamiso. Ngokwesibonelo, njengoba ezinsukwini ubudala, ukuhlela ekhonsathini ngaphansi efasiteleni ukucula misindo. Yebo, kuyaqapheleka Yiqiniso, angabonwa omakhelwane, hhayi wonke umuntu ozokwamukela izinhloso ezinhle lamajaha, ngubani, ngaphandle othandekayo wakhe, futhi enye kwesigamu indlu yavuswa. Kodwa kubalulekile? Into esemqoka ukuthi ingalali ozithandayo hhayi udidekile impendulo amazwi anjalo.
Kwenzeka futhi ukuthi guy namahloni kakhulu. Kunengqondo, bekulokhu impela isikhathi eside, uhlangana futhi enakekela bathandekayo, kodwa ukusho amazwi ambalwa ayisihluthulelo noma ucabange indlela ukwenza intombazane isiphakamiso, kubi kuye kukaZamcolo. Khona-ke udinga iqhinga. Ngokwesibonelo, zama ukuvula ukuqashelwa sina okuhlekisayo. Ikakhulukazi ngoba kungenzeka ukuthi ube nakho ku umkhondo ukuqashelwa. Ngakho thumela wakhe isimemo lomshado wakhe siqu ringlet enamathiselwe engenazo abese ucacise mangaki isifuna ukuhlela umcimbi omkhulu.
Hhayi-ke, uma zonke izindlela ezihlongozwayo - bengakwamukeli, ke kungcono yezinhlamvu kancane kuze bese beveza awabo, indlela yokwenza intombazane ukunikela. Ikakhulukazi ngoba ethandekayo engcono yazi ukuthi ulindele futhi ifuna ukuzwa amazwi kubaluleke kangakanani evela kumuntu omthandayo. Badinga kuphela ukhumbule ukuthi udinga ukusho amagama nangomphefumulo okumsulwa hhayi imicabango kancane okumsulwa. Phela, njengoba siqala umgwaqo kule Valentine ekuphileni okuzayo.
Imisho yisibabazo ngesiRashiya. Izibonelo imisho yisibabazo. Isisusa umusho yisibabazo
Emazinga emfundvo isimo Federal. Uphiko yase standard isimo sezemfundo